🥇 ▷ IPhone-ka soo socda ma yeelan doono xariiqyada anteenooyinka ✅
IPhone-ka soo socda ma yeelan doono xariiqyada anteenooyinka
Apple waxay soo saartaa naqshad cusub oo loogu talagalay anteenooyinka iPhone
Apple waxay diiwaan gelisay patent cusub taas waxay keeni kartaa isbeddel ku yimaada qaabeynta iPhone-ka soo socda ee Apple, ayaa sheegay in isbaddalku uu diiradda saari doono baabi’inta khadadka ku yaal dhabarka aaladda, kuwani waa lama huraan in loo dammaanad qaado isticmaale soo dhaweynta wanaagsan ee aaladda.
Qalabka cusub wuxuu sii wadayaa inuu haysto anteenooyinka iPhone-ka
Patentigaani wuxuu tixraacayaa nooc cusub oo ah shey aan awood laheyn waxaana laga sameyn doonaa shey bir anodized ah oo loo isticmaali karo in lagu dhigo meesha anteenada ee iPhoneka soo socda. Waxaa mahad leh xalkaan cusub ee wiilasha shirkadda California ay heli laheyd ka saar khadadka laga helay gadaasha iPhone-ka hadda jira.
Marka loo eego waxa ay wiilasha Cupertino ku tilmaameen tilmaanta patent-ka:
Qaab cusub oo naqshad leh oo sii ahaan doona xarrago leh oo la jaan qaada jidhka intiisa kale ee birta ah ee aaladda, gurisiinta dhowr qaybood oo adag oo gudaha ah.
Maaddaama muruqyada raadiyaha ay dib u celiyaan birta iyo meesha ay anteenooyinku ku sii socdaan iPhone 6 ee hadda jira waxaa daboola waxyaabo ay ka mid yihiin bac ama galaas. Si kastaba ha noqotee, sagxadahaani waxay leeyihiin astaamo qurux badan oo ka duwan kan birta, shey matali kara “jab” naqshadeynta marka loo eego jirka intiisa kale ama hoyga aaladda. Alaabada aan ahayn bir waxay hoos u dhigaan taabashada sifiican iyo joogtada ah ee kiiska iPhone. Hadda Apple Waxay heshay qaab ay ku gaadho qaab dhismeed isku dhafan oo leh muuqaal macdan ah, laakiin iyada oo aan la awoodin inay saameyn ku yeelato raadyowga idaacadaha.
Qalabka cusub ee ay ilaalisay Apple Waxay leedahay qaab la mid ah kiiska birta iPhone
Habka cusub ee ay adeegsato Apple waxay ka kooban tahay beddel u dhexeeya qaybta bir soosaarka iyo tan meta metaide, oo isku xirmaya. Dabcan, iyada oo aan la galin qaybta farsamada, natiijada ugu dambeysa ayaa ah shey u dhigma malawadka guryaha oo la hubiyo in wax dhib ah kama jiraan ceymiska iyo anteenada aaladda.
Ma ka fikirtaa xariiqda Naqshadeynta kiisaska iPhone 6 leh khadadka anteenooyinka ee maaddooyin kala duwan mise waa mid aan dan ka aheyn?